khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal षड्यन्त्रपूर्वक ममाथि आक्रमण भएको हो : रामचन्द्र पौडेल – khabarmuluk.com
षड्यन्त्रपूर्वक ममाथि आक्रमण भएको हो : रामचन्द्र पौडेल
तपाईंले त पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम कसरी विवादमा प(यो रु यो पनि अनौठो भयो नि?
अहिले देशमा नेकपाको सरकार छ, सामान्यतया हाम्रोमा जसको सरकार छ, साधन र स्रोतमा उसैको हालिमुहाली हुने संस्कार छ । तपाईं उद्घाटन गर्न कसरी पुग्नुभयो भन्ने पनि छ नि?
तर, कांग्रेस वा नेकपा जसको पालामा बने पनि त्योे पुल देशको ढुकुटीबाट बनेको हो । यसमा कांग्रेस र नेकपा भनेर यत्रो उत्पात किन भएको होला?
तपाईंलाई जसरी नियन्त्रणमा लिने काम भयो, त्यो नितान्त त्यहाँको प्रहरी–प्रशासनको कदम हुन सक्छ, त्यसमा तपाईंले सरकारको नेतृत्व र नेकपालाई नै किन जोड्न खोज्नुभएको छ?
यहाँ प्रहरी–प्रशासनको शैली जुन किसिमको देखियो, यसमा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद नपाई ममाथि यति ठूलो आक्रमण हुने कुरै हुँदैन । तल्लो तहका नेताहरूले रामचन्द्र पौडेलको कुनै दोष छैन, उनले नितान्त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको, गाउँको, उनको मिहिनेत, पसिना, परिश्रम परेको पुलको उद्घाटन गर्न लागेका हुन् भनेका छन् । तर, माथिबाट निर्देशन नभई ममाथि कसैले हमला गर्न सक्दैन । यो सबै माथिल्लो तहबाटै भएको हो । माथिल्लो तहबाटै प्रस्तुत गरिएको अधिनायकवादी चरित्रको प्रतिनिधि घटना हो । नेपालमा अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ, तर साम्यवाद त होइन नि १ यो घटनाले कम्युनिस्ट कहिल्यै लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । मैले कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भन्ने महसुस गरेको छु । तनहुँमा हामीले त्यति धेरै विकासका योजना गरेका छौँ । हामीले त कुनै योजना दिन्छौँ, हाम्रो पार्टीमा आऊ भनेरसमेत भनेनौँ । तर, आज कम्युनिस्टले राज्यकोषको उपयोग गरेर प्रतिपक्षलाई दमन गर्ने काम गरेका छन् । हाम्रो नेतृत्वमा दुई वर्षअघि नै निर्माण भएको पुल उद्घाटनमा अवरोध गर्नुपर्ने के कारण छ रु यो सामन्तवादको युग होइन त । यो त लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हो ।
यो घटनालाई तनहुँका सिडिओले लाजमर्दो घटना भनेका छन्, यो लाजमर्दो घटना हुन नदिन सरकार र प्रशासनले के गर्न सक्थ्यो?
यो त सिडिओलाई मात्रै होइन नि, तनहुँवासीका लागि लाजमर्दो घटना हो । देशभरिका जनताले भनिरहेका छन्– यो घटनाले त नेपालको लोकतन्त्र नै लज्जित भएको छ । हाम्रो नेपाली सभ्यता नै लज्जित भएको छ । यस्तो गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन नि १ मैले त कुनचाहिँ कानुनले यो निषेधाज्ञा लागू गरेको भनेर सोधेको छु । तर, कुनै हिसाबले औचित्य पुष्टि हुने आधार नै छैन । कुनै आधार नै छैन निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने । यो निषेधाज्ञा रामचन्द्र पौडेलको विरुद्ध मात्रै होइन, व्यास नगरपालिकाका १, १० र ११ का जनताको मात्रै होइन, यो त सारा नेपाली जनताको अधिकारमाथिको निषेधाज्ञा हो ।
तपाईंलाई नियन्त्रणमा लिने विषय राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रविरोधी त भयो नै, शारीरिक रूपमा तपाईंलाई कस्तो असर परेको छरुयो । दिउँसोभरि त कुनै दुखाइको महसुस भएन । बेलुका भएपछि शरीरमा दुखाइको महसुस भयो । साँझमा दुखाइ बढेपछि स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरेँ । अझै पनि जिउ दुखिरहेको छ ।
तपाईंमाथि प्रहरी–प्रशासनले दुव्र्यवहार ग(यो भनेर समाचार आएपछि देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले फोन गर्नुभयो होला, उहाँहरूसँग के–कस्तो कुरा भयो?
मलाई नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजी र नेता माधवकुमार नेपालजीले फोन गर्नुभएको थियो । उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी भयो । तर, सरकारको तर्फबाट कसैसँग पनि कुराकानी भएको छैन । अहिले सरकारमा भएका मन्त्री विष्णु पौडेललगायत अरू नेता साथीहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा मसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले पनि बोल्नुभएको छैन । कुराकानी भएको छैन । अरू नेता साथीहरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो होला, तर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, फोन उठाउन पाइनँ । नयाँपत्रीकाबाट
प्रकाशित मिति:मङि्सर १९, २०७७